I-Logitech ityhila i-ASTRO entsha yokudlala i-A10 Gen 2 ye-headset | ndisuka kuMac
I-Logitech ityhila i-ASTRO entsha yokudlala i-A10 Gen 2 ye-headset
Ngoku kuya kufuneka uyazi ukuba iLogitech luphawu olufunxa ezinye iibrendi ezigxile kwimiba eyahlukeneyo ngaphaya kwetekhnoloji eqhelekileyo kunye nomsebenzi, njengokudlala, umzekelo. Kule meko Inkampani ibonelela ngee-headphones nge-60 yee-euro abanexabiso banokuba nomdla ngokwenene kubo bonke abo bacinga ukutshintsha okanye ukuthenga i-headset ethile yabadlali kodwa ngaphandle kokuchitha intywenka yemali.
Ezi zintsha I-ASTRO Gaming A10 Gen 2
Ukwakha kwi-headset ye-A10 yoqobo, olu kukhutshwa lutsha lubonelela ngentuthuzelo engenakulinganiswa kunye nomgangatho wesandi kunye noyilo olucingisisiweyo kunye nokuguquguquka kwabadlali banamhlanje. Yakhelwe ukusuka phantsi ukuya phezulu ukuze kuphuculwe amava okudlala, ezi A10s zibonelela iintlobo ezinomdla zemibala, uyilo oluhle, umgangatho weaudio kunye nexabiso elifanelekileyo ngokwenene. Uphuculo lwenziwe ekusebenzeni kwayo kunye neempawu, ukufezekisa i-headset ekhaphukhaphu ngokwenene, ikhululekile ukunxiba iiyure kwaye ibhetyebhetye kwimidlalo eyahlukeneyo yemidlalo ekhoyo ngoku.
Intloko A10 Gen2 hambisa iaudio ethembekileyo elungelelaniswe ngononophelo kunye nabaqhubi abaguqukayo I-ASTRO Audio 32mm zihlengahlengiswe, njengoko ziqinisekisa amava antywilayo. Babonisa imakrofoni edityanisiweyo edibeneyo ye-boom enokuthi ijikelezwe phezulu ukuze isimumu kwaye ihle kunxibelelwano olucacileyo lwekristale kunye ne-6mm ye-microphone engaqondiyo. Kwisithuba nje seentsuku ezine uya kufumana ezi headphones zifumaneka ukuba zithengwe kwiwebhusayithi esemthethweni ye-Astro.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » Iikhompyuter zeMac » Izixhobo » I-Logitech ityhila i-ASTRO entsha yokudlala i-A10 Gen 2 ye-headset
UKuo ulumkisa ngelithi asizukuba neMac mini entsha kude kube ngu-2023
I-Mac mini entsha ene-M2 kunye ne-M2 Pro kwi-trigger yamahemuhemu